Labsii mallattoo elektrooniikii irratti mariin ummataa taasifame - Seensa - Information Network Security Agency
Daayrektarii ijjoo hogantoota giddu-galeessaa fi ol’aanoo wajjiin waltajii wal baruu taasisaniiru
Daayreektarii Ijjoo Eejensii Nageenya Saaphana Infoormeeshinii obbo Tamasgan Xirunah dalagaa isaanii ifatti eegalaniiru
Labsii mallattoo elektrooniikii irratti mariin ummataa taasifame
Mana mare bakka bu'oota uummataatti ቋሚ ኮሚቴn dhimoota saayinsii, wal-qunnamtii fi teeknooloojii akkasumas ቋሚ ኮሚቴn dhimoota seeraa, haqaa fi bulchiinasaa waliin ta'uudhaan tumaa labsii mallattoo elektrooniikii erga laalanii booda mariin ummataa akka irratti taasifamuu murteessu isaaniitti aansee guyyaa kibxataa sadaasa 26, bara 2010 labsiicha irratti mariin/yaadni ummataa taasifameera. Itti aansuudhaanis gumaachoota fi fooyyefamtoota yaada uummataa irraa sassaabaman dabalatuudhaan tumaan labsiicha seera ta'ee akka bahuu ni eegama.
Dhimoota ijjoo labsiicha qopheesuuf akka ka'uumsaati ta'an keessaa adda duruummaan wal jijjiiraa oddeeffannoo elektrooniikii wajjiin wal qabatee hanqinoota seeraa mul'atan fi sodaawwa nageenya (wal amanuu) hambisuu dha. Labsiichi mallattoo elektrooniikiitiif beekamtii kan kennuu dha.
Mallattoon elektrooniikii enyummaa dhugaa qamoota eergawwan onlaayiniidhaan adeeman, wal-qunnamtiiwwan yookiin wal-jijjiiraawwan daldalaa keessatti hirmaatanii adda baafachuu fi mirkanneessuuf, dhugummaa eergaawwanii mirkanneesuuf, furtuuwwan iciitii fayyadamuun icciitummaa eeguu fi akkasumas wal ganuu hambisuuf adeemsa gargaaruu dha.
Tumaan labsiichaa oggeessoota seeraa fi teeknooloojii eejensii nageenya saaphana infoormeeshinii, hayyoota yunivarstii fi qaamoota biro (ባለድርሻ አካላትን) bif hirmaachiseen kan qophaayee dha.